China Umzi mveliso weZindlu kunye nabenzi | Jitai
Iimveliso eziphambili zibandakanya iphakheji yesinyithi yeesekethe ezihlanganisiweyo ezihlanganisiweyo, izinto ze-opto-elektroniki, izinto ze-microwave, izixhobo zokucoca ulwelo, izixhobo zenzwa kunye nezixhobo ezinamandla amakhulu. Iimveliso ziyasebenza kwimimandla enje ngenqwelomoya, inqwelo moya, izixhobo zombane kunye nonxibelelwano kwezomkhosi nakwezorhwebo. Inkampani yenze inqanaba lophathiswa leeprojekthi zophando lwezenzululwazi, kwaye yamkelwe ngabasebenzisi.
Yenziwe liziko le-maching okanye i-CNC yokugaya oomatshini, akukho mfuneko yemowudi emiselweyo kwimveliso yangaphambili. Ngoyilo oluguquguqukayo, ixesha elifutshane lokuphuhlisa, likhokelela ekwenziweni kwezinto eziphantsi zokumelana ngeendlela ezahlukeneyo ezikhokelayo. iisekethe ezidibeneyo.
Olu hlobo lwezindlu lolona hlobo lwendibano iphambili yombane weSyididi eDityanisiweyo yamandla, isiseko sentsimbi ebandayo eqengqelekileyo okanye i-oxgyen yasimahla yobhedu lwezixhobo ezifanelekileyo ezihambisa ubushushu ezihambisa ubushushu obuveliswa sisiphaluka sangaphakathi ukuya ngaphandle ngokukhawuleza kwimeko yokungabinamandla okubangelwe kukuqokelelana kobushushu. ihlala ithatha uxinzelelo oluphantsi lobhedu lwe-4J50 ingxubevange, efanelekileyo kwimfuno yokuhanjiswa kwamaza aphakamileyo.Izikhokelela zihlala zikumgangatho ophindwe kabini emgceni kwaye ubungakanani bungaphantsi (ngesiqhelo iziqwenga ezi-6 ~ 20) ubume bezindlu bukhulu kwaye bunesakhiwo sebandla esine-flange , ihlala yamkela i-Au ekhethiweyo yokuhambisa isikhokelo.
* Ezezindlu zamkela izinto zeCRS1010, inokusasazeka kobushushu okuhle.
* Zikhokelela amelana eliphantsi ubhedu cored izinto ingxubevange amd amandla elungileyo yangoku.
* Indlela yokutywinwa kweKapa isebenzisa itekhnoloji yokutywina ethembekileyo ethembekileyo.
* Ukuthunyelwa kwepini yomhlaba kufuneka kugqitywe ngumthengi.
* Isiciko siyilelwe ngomlilo kubukhulu bembonakalo yezindlu.
* Abathengi bakhetha izindlu ukuba zizalelwe ngokupheleleyo okanye zikhokelele kwi-Au ngokungqinelana neemfuno zabo.
* Zonke izalathiso ziyahlangabezana neemfuno ze-GJB548B
Icandelo lesibiniUmgaqo woyilo lwezindlu zamandla
Imo yemilo yendlu yamandla isebenzisa iziko le-maching okanye i-CNC yokugaya oomatshini.
1.Ukukhethwa kwezinto zokwakha izindlu
Izindlu zamandla zihlala zisebenzisa intsimbi ebandayo eqengqelekayo enobushushu obuhle.
Ukhetho lobukhulu bolwakhiwo lwezindlu
Ukutywina ubukhulu bezindlu
Ubuncinci beemfuno zobuchwephesha yi-1 * 10-3Pa.cm3 / s yeemveliso zephakheji yesinyithi ukuze into leyo ichaphazele ubungqingqwa bezindlu kufuneka ziqwalaselwe kuyilo. Ngokusekwe kumava exesha elide ekuhlwayeni, ukuqinisekisa Ubume bemveliso, ubukhulu bokutywinwa kwezindlu zamandla (izinto zentsimbi ezibandayo) kufuneka zilawulwe ≥1.5mm ngelixa umda wobuchule bokuyila i-insulators yeglasi ubukhulu bayo akufuneki butyebe kakhulu, ihlala ingaphantsi kwe-2mm. , izindlu zihlala zifumana ukuguqulwa kwenkqubo yokutshisa iqondo lokushisa okuphezulu, uyilo lobunzima bodonga lwezindlu akufuneki lube lincinci kakhulu.
Ububanzi bemingxunya yeglasi yokwambathisa endlwini
Uyilo oluqhelekileyo lwezindlu zamandla yintsimbi ebandayo eqengqelekileyo, iglasi yokutywina yentsimbi, i-4J50 ikhokelela ekutyikityeni isakhiwo sokutywina.Ireyithi yokwanda kokulingana kwe-thermal yi-12: 9: 9, olu hlobo lwesakhiwo ikakhulu luxhomekeke kububanzi phakathi kwemingxunya yeglasi kunye nobukhulu bezinto yentsimbi ebandayo eqengqelekileyo ukuqinisekisa ubume bezindlu, ke ububanzi bezinto kufuneka buhlangabezane nemfuno.
Egqithileyo Iplagi-esecaleni kwiphakheji
Okulandelayo: Iphakheji yentsimbi ethe tyaba
Izindlu zeFeni Alloy